बल्ल बा’हिरियो लाहुरे र स्मिताको भित्री र’हस्य, पुनर्मिलनमा विवाद – Dainik Samchar
February 9, 2021 390
काठमाडौ, इन्डियन लाहुरे रहेका राहुल गुरुङ्ले स्मीतासंग निकै सानोमा विवाह गरेका थिए । यो घटना अहिले सामाजिक सञ्जाल निकै चर्चामा छ । उनीहरुको प्रेम विवाह थियो । तर स्मीताले गरेको एउटा गल्तीका कारण यति राम्रो जोडी भताभुंग भएको थियो ।
स्मीतालाई जनकपुरका नारायण यादव भन्ने ब्यक्तिले सुरुमा मिठा कुरा गरे । स्मीतालाई विश्वासमा पारे । आफ्नो सानो छोरीलाई स्कूल लैजान भनेर घरवाट निस्केकी स्मीता अन्तत घर छोडेर नारायणलाई भेट्न काठमाडौ गइन् । उनी हराएपछि स्मीताका श्रीमानले खोजी गरे ।
एक महिना पछि उनी काठमाडौको एक होटलमा नारायणसंग फेला पारे । तर जब स्मीतालाई उनका आफन्तले फेला पारे त्यसपछि स्मीताले नारायणको वास्तविकताका बारेमा थाहा पाइन् । नारायणले आफु अविवाहित भएको र परिवारमा कोही छैन भनेर झुटो बोलेका थिए ।
उनीहरुबीच ८ महिना देखि सामाजिक सञ्जालमा कुरा हुँदै गयो । तर त्यती विश्वासमा पारेर काठमाडौ बोलाएका नारायणले स्मीतालाई बेच्ने उद्देश्य राखेका थिए भन्ने कुरा जब उनले थाहा पाइन त्यस पछि उनी छाँगावाट खसेजस्तो भइन् । अहिले उनी निकै पछुताएकी छन् ।
तर गल्ती भइसक्यो । उनले आफुले गल्ती स्वीकार गर्दै अन्तिम पटक आफ्ना श्रीमानसंग एउटै फ्रेममा आए । तर जव स्मीताले गल्ती स्वीकार गरिन् त्यती बेला सम्म उनको जिवनले अर्कै मोड लिइसकेको छ । दुवै जनाले सहमति मै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय गरे । जब अन्तिम पटक उनीहरु भेटिए त्यसबेला दुवैले आफुलाई सम्हाल्न सकेनन् ।
स्मीता बोल्नै सकिनन् भने राहुलको आँखा भरिएर आयो, गला अवरुद्ध भयो । राहुल गुरुगं इन्डियन लाहुरे र सानी छोरीलाई छोडेर हिडेकी स्मीता काठमाडौको होटलमा जनकपुरका नारायण यादवसंग भेटिएकी थिइन् । श्रीमानले आफुले कहिल्यै मोबाइल चेक नगर्ने बताएका थिए ।
मैले श्रीमतीलाई कहिल्यै संका गरिन बिश्वास गर्दा अहिले घर न घाटको भएको बताएका थिए । बिचमा घटनाक्रम जति नै आएपनि अन्त्यमा आएर पुनर्मिलन भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । नेपाली समाजमा महिलाकालागी एउटा भन्ने चलन,‘जस्ले घरको संघार नाघेर जान्छ त्यसलाई त्यो घरमा फर्कने कुनै अधिकार नै छैन ।
तर यो भनाईलाई नकारेकाछन् इण्डियन लाहुरे राहूल गुरुंगले । उनले एक महिना अगाडी आफ्नो घरको संघार नाघेर अर्कैसंग गएकी श्रीमती स्मीतालाई फेरी आफ्नै घर र मनमा बास दिएका छन् । राहूलको यो निर्णयको यतिबेला संसारभरीबाटै सबैले प्रशंसा गरेका छन् ।
Prevदुःखद खबर; स्कुटर दु’र्घटनामापरि कलाकार पूजा गहतराजको मृ’त्यु
Nextत्यसपछि एकपटक प्रयोग गरेपछि उनलाई आनन्द आउन थाल्यो !
खुसीको खबर : सशस्त्र प्रहरीमा ४ हजार भन्दा बढी नयाँ भर्ना खुल्दै ! (सुचना सहित)
एमालेमा केपी ओलीले यसकारण मन पराउँदैनन् अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई